Yakagadzwa naNick Roach mu2008, Елегантни теми inowanikwa muSan Francisco. Iyo kambani inopa 87 yakanaka ye WordPress теми uye 4 тематични премиум теми kune yakawanda kupfuura vatengi ve200,000. Ndiyo nzira yakakwana yekugadzira yako WordPress site maererano nezvido zvako uye unofarira kunze kwekuti iwe uite chikamu chakakura chekunyora кодиране.
1 Zvakanakisa Теми Zvirongwa & Kudhara
1.2 The Kwete-Nhingi Good
2 Мусоро унокоша
Zvakanakisa Теми Zvirongwa & Kudhara
Izvo urongwa huri nyore uye ne $ 39 pagore uyewo mari shoma (kunyange ichiri yakakwana). Inokurudzira kusvika kwakakwana kune zvese zvinyorwa, zvigadziridzo zvinyorwa zvisingagumi, uye rubatsiro rwekutanga rwekusimbisa. Iyo nyanzvi, wepakati pegadziro chirongwa, inowanzova yakakurumbira. Icho chinouya chizere nezvose zvezvinhu zvehupenyu hwako asi ne $ 50 yakawanda (iyi hurongwa inodhura $ 89 pagore) iwe unowanawo kukwana kwakakwana kune zvose plug-ins uye yakanyora mafirimu Photoshop. Urongwa hwekupedzisira, hupenyu hwehupenyu huri kuronga, ndiyo yakazara yakazara. Kusiyana nezvirongwa zviviri zvokutanga hapana chikonzero chekubhadhara mwedzi wemari pano. Nenguva imwe chete yekubhadhara $ 249 unogamuchirwa kuwana zvese zvinyorwa uye plug-in, rubatsiro rwebasa rekusimbisa, uye rakagadzirirwa Photoshop mafaira, pamwe chete nemitambo yakabudiswa munguva yemberi ywakopeneu.
Характеристики ЛиченДевелапър Доживотен достъп
mutengo $ 39 / горе $ 89 / горе $ 249 / горе
Zvisarudzo Zvinoverengeka: Iko kuunganidza kwemashoko kwakakura uye kwakasiyana. Iko kune zvinyorwa zvinoenderana nezvose zvinodiwa, kubva pamablogi kvivika kune mabhizinesi kusvika kune сайтове за електронна търговия. Iwe unogona kunyatsogona kuwana chimwe chinhu chinoenderana nezvose zvaunoda uye zvaunofarira. Uye zvechokwadi, vanhu seElegant Themes nguva dzose vanowedzera mitsva itva kuitira kuti pane zvimwe zvingasarudzwa zvokusarudza kubva zuva rega rega.
достъпни: Mutengo unoshamisa zvikuru. Ne $ 89 purogiramu yemwedzi, iwe uri kunyanya kubhadhara $ 1 pamusoro wehurukuro.
Nguva dzose inovandudzwa: Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinoshandura nguva dzose uye dzinogara dzichipa rubatsiro. Zvakakosha kuziva kuti shanduro yekugadzirwa nayo inokosha zvikuru, iyo inonyanya kukosha pazvinosvika pakubata neElegant Themes. Vanhu vakawanda vanopedzisa vachishandisa misoro yakagara yakagadzirirwa sechinhu chakanaka chekugadzira kwavo, kuchinja kodeji nenzira inoita kuti zvirongwa zvive zvakakwana kune zvavanoda. Saka iwe unoda boka rekusimudzira rinoramba richicherechedza kukurudzirwa kwemashizha, pamwe nekusunungura zvinyorwa поза пози zvichidikanwa. Uyezve, pasina chinhu chakanaka, kutsigirwa nguva dzose iwe uchapedza nguva yakawandisa kugadzirisa nekugadzirisa zvinetso pane chimwe chinhu chingafamba chakaipa.
Kusununguka kwekushandisa: Zvose mune zvose, Elegant Themes yakanaka nyore kushandisa, kunyange iwe uri newbie; haitore nguva yakareba kuti uwane hombe yezvinhu. Uyezve, Nzvimbo dzakanaka dzinoshandawo kuve nechokwadi kuti zvinyorwa zvinowirirana nezvose zvinowanikwa paIndaneti, kusanganisira Firefox, Explorer, Safari, Chrome, nezvimwe. Iwe unogona kuchinja pakati pevasikana pasina kuve nekutya.
The Kwete-Nhingi Good
Кодът: Pane dzimwe nyaya dzine code pane dzimwe dzeshe; Zvinosuruvarisa, код на Ник haina chakanaka. Nyaya iyi inonetsa zvikuru mune dzimwe nyaya dzitsva dzisina kuongororwa zvakajeka. Kana iwe uri kunetseka nezvekunyora nyaya zvingangodaro zviri nani kunamatira kune dzimwe dzhembera dzakare. Kunyangwe zvingave zvisina kufanana nenyorwa iyo kambani yakave nenguva yakawanda yekugadzirisa mishonga. Uyezve, zvinyorwa zvekare zvakanyatsoongororwa, izvo zvinoderedzawo marudzi ose emakodhi.
Panyaya yekodhi, kune dzimwewo mitsara yekugadzirisa mafambiro ematambudziko nenzvimbo dzinoshandisa dzidzo dzeE ET. Ini pachedu ndakanga ndisingam Над nekodzero yekuti nyaya ini handigoni kunyatsopupura izvi.
ePanel: ePanel ndiyo табло за управление yemhando yepamusoro uye yekutendeseka, ini ndoga ndinovenga kuti inoshanda sei. Icho hachisi chechokwadi chekuita nenyaya asi ndinofunga kuti ingadai yakave yakanyanya kushandiswa. Zvose mune zvose, ndinongonzwa kuti hazvina kunyatsogadzirwa.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana Zvidzidzo – Kupfuura 80 premium WordPress теми, tora pano kuti uone chaiwo madhemoni demos.
Iyi ndiyo musoro wekupedzisira kubva kuЕлегантни теми uye zvechokwadi inoshamisa.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinorondedzerwa se "akachenjera kupfuura mamwe ose, anonymousanya kushandiswa mumusoro." Uye izvi zvinotsanangurwa zvinoreva zvechokwadi. Zvechokwadi Divi inoratidzira huwandu hwezvimwe zvinhu zvakagadzirwa zvakasimba, zvichikupa kutongesa zvakakwana pamusoro pekugadzirwa kwewebsite yako. Muvakidzani Wemiviri anokubvumira kuti uumbe zvirongwa zvinoshamisa. Uye chikamu chakanaka? Iwe hauzombofaniri kunetseka nezvekubata kadhi. Zvechokwadi, Divi anozvirumbidzawo nehutano hwekugadzira webhu uye mapeji epaji peji.
Zvinoshamisa kuti zvakakura pakuverenga nyore, zvakagadzirwa nehuwandu hwakazara, yakareba-format style. Iyo inofanirwawo kugadzirisa kugadzirisa; Fable inoshandisa CSS mhizha mibvunzo kuti itange matanho akasiyana-siyana kuti agone masikirwo akasiyana eefesi. Hapanazve kugovera uye kupukunyuka pamaserafoni kana mahwendefa. Izvo zvinouyawo zvizere ne peji pepa шаблони uye nhamba shomanana, zvinoreva kuti unogona kugadzira zvakagadziriswa zvirongwa pasina dambudziko rokutarisana nekodhadhi код. Zvose mune zvose, Fable iri nyore, unyanzvi, uye inopa zvinyorwa zviri nyore kuverengwa. Ndiyo hurukuro yakakwana yeve-блогъри отказват.
Тема, базирана на кубва панел giradha, inopa dzimba dzine nhoroondo dzine simba; inoshanda kuratidza nhau kuburikidza nemufananidzo, kuzadza chinyorwa nemifananidzo.
Iyi nheyo yakakwana kune vanyori vanoda kutsvaga basa ravo mune imwe nzvimbo yepasitori yakafanana nesiti kana mablogi anotsvaga kupa vaverengi vavo nzira iri nyore uye inoyevedza yekufamba kuburikidza nenzvimbo dzavo dzavo. Izvo zvinogadzirisa chimiro chekutanga zvakakosha pano, sezvo mawebsite akazara nemifananidzo inogona kunge isina kuoma kufamba pamapiritsi nemichina yekushandisa.
Демо радхи & kurodha
Zvose mune zvose, simba rayo rinonyanya kushanda nekogadzirisa, asi rinounza chido chekuona kune tafura zvakare. Iyi nheyo ine maitiro ekuteerera, ePanel, kushandiswa kwevashandisi, kushandiswa kwemajiji uye mapikicha mafupi.